I-ATC - i-Belay kunye neCape Rappel kwi-Climbing
Izixhobo zokunyuka kwi-Belaying kunye ne-Rappeling
I-ATC okanye i-Air Traffic Controller ngumhlobo wokubetha kunye nokukhumbula idivaysi eyenziwe yi-Black Diamond Equipment. Yisisombululo se-tubular, esinika indawo engaphezulu kunye nama-angles aphezulu ekudaleni ukuxhatshazwa nokuyeka amandla ngaphezu kwesicatshulwa se-Sticht plate. Iifayile zeThu ziphakamileyo kwiiplati zokubukisa kuba zivumela ukulawula okuchanekileyo kwinqanaba lakho lokuphuma. Zenziwe nge-aluminium.
Ukuphuhliswa kweCandelo le-ATC Tubular Belay
I-ATC iyona hlobo oluqhelekileyo elisetyenziswayo lwefowuni, kwaye ngoko igama lomzekelo we-ATC liye lafana nezixhobo ze-belay, ezifana ne-Kleenex emele izicubu zomzimba.
I-original Diamond Air Traffic Controller eqala ngo-1993, eyenzelwe nguChick Brainerd,
Ukuphuculwa kwezixhobo zeplatesti kukuba iiplate ziyakunqumla phantsi kwaye zikhiye ngokumelene ne-carabiner xa intambo ikhutshwe kanzima. Ngokusebenzisa ityhubhu endaweni yeplate, i-slots yayiyi-intshi yesiqingatha ngaphezu kwe-carabiner kwaye ngoku ke intambo ingasondliwa phantsi kwengxaki. Oku kwenza ukuba i- belay mechanics ibe lula. Umgca onqabileyo uphinde udale ukungqubuzana okungaphezulu, ukunika umgca wecala.
I-ATC-XP yinkqubo yokuqhaqhafaza eyahlukileyo evumela ukuba ulawule ubuninzi bokuxhatshazwa kunye nokuchasana ozifunayo kwiimeko ezahlukeneyo xa ulala okanye ukhumbula kwakhona kwaye unikeza ukulawula okukhulu xa usebenzisa iindophi zeeramitha ezahlukeneyo. Icocekile kakhulu i-V-grooves kwicala eliphezulu lokuxubha lokubethelela abagibeli abakhulu kunye nokusebenzisa iindophi ezincinci kumgangatho weqhwa nekhephu. Ungasebenzisa i-side-friction side side ukuze ubethe i-lighter bhanya okanye wenze ii-rappels ezikhawulezayo.
Nangona kunjalo, ayinayo into yokukhiya ngokuzenzekelayo njengamanye amaxabiso kunye namanqaku akwenzayo.
Uphuhliso oluqhubekayo lubandakanya i-ATC-Guide, enezinto zokuvimba ngokuzenzekelayo, yongeza amandla okubetha umlandeli ngqo kwi-anchor. Esi sici sidinga ingqalelo kumyalelo womenzi ukuba enze ngokuchanekileyo.
Ukusebenzisa idivayisi ye-ATC Belay
Ukusebenzisa i-ATC yokubetha idivaysi, umtya wetambo uchithwa ngenye yezintlu. Emva koko i-carabiner idlula ngaphaya komtya wetambo kunye nomgcini we-ATC. I-carabiner ixhomekeke kwi-loop ye-belay ye-harrower's or harder. Xa ukuxela, enye yokuphela kwendophi ifakwe kwisikhonkwane, ngelixa elinye ligcinwe kwisandla sokuqhayisa.
Ngelixa i-ATC inemigangatho emibili, ukuba usebenzise kuphela intambo, usebenzisa esinye slot. Kukho izibini ezimbini zamatyala apho usebenzisa iindophi ezimbini. Awunamatheli intambo efanayo kwiintlobo zombini.
Impazamo enkulu kakhulu enokwenziwa yenzelwa ukuba i-climber ayifumane i-carabiner ifakwe kwi-loop yetambo. Oku kungenzeka ngenxa yokungalindelekanga, izambatho ezihamba ngendlela, izimo zemozulu ezimbi, njl. Ngaphandle kokuba i-carabiner isendaweni, intambo iya kuphuma ngaphandle kwe-ATC kunokuba inikeze nayiphi na ingxabano yokumisa ukuwa okanye ukuphuza ukuhla. Ukuba usebenzisa ii-carabiners okanye iimbambo ezimbini, njengoko zenziwa kwiimeko ezahlukeneyo, kufuna ukuba ingqalelo engakumbi ukuqinisekisa ukuba zombini iisango zihamba nge-carabiner okanye i-carabiners.
Uluhlu lokuHlola lweeKhaya
Ngaba iikhredithi ze-Ice Skates zilungele ukukhwela umzobo?
Indlela yokuthenga iimpahla ze-Ski: Ukuthelekisa iindleko kunye nomgangatho
I-MAC Powersphere Driver nge Burrows Golf
Isixeko saseNew York ngeXesha le-19
Ukwahlukana phakathi koMkhosi weHlabathi kunye neNqabunga
Ngaba Ixesha Lokuhamba Linokuthi Linokuhamba?
Ukuhlalutya uRobert Frost 'I-Peck yeGolide'
UbuKristu bufana nobuHindu
Amaqiniso ePraseodymium - Element 59
UPapa uClement VI
UGalileo Galilei kunye neMigqaliselo Yakhe
Indlela yokusebenzisa i-Highlighter ukuphucula amaBakala akho
UFeinstein uya kuHlulela ekutshitshweni kweKholeji yoNyulo
Ubusika beBlackberry: I-Cold Snap isisiseko kwiNkcubeko
Iimpawu ezili-10 ze-Geographic malunga ne-Idaho
Ii-albhamu eziphambili zeRap ka-2008
Indlela yokutshintsha i-Camry yangaphandle Isango lokuPhatha
Ukutsala umfazi weVirgo
15 George Orwell Quotes Ukwazi